Nzuzo - PetrPikora.com
PetrPikora.com bụ onye ọrụ nyocha nke HSTS technology (HTTP Strict Transport Transport). Nchekwa Ụgbọ njem na-egbochi HTTP (HSTS) ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na anyị na-eme ka anyị na-enyere anyị aka ka anyị na-enyere anyị aka ka anyị na-enyere anyị aka ka anyị na-enyere anyị aka na-enyere anyị aka ịbanye na ya (tzv. kuki na kuki). Ngwá ọrụ nke ọrụ, na ihe nkesa na-echebe gị na ndị na-ezigara gị HTTPS ngwa ngwa na-ezigara gị na HTTPS ngwa ngwa na-ezigara na HTTP profaịlụ. HSTS chepụtara RFC 6797. HSTS ngwa ngwa webový na-arụ ọrụ na-ezigara HTTP ọrụ Ụgbọ njem-Nchebenke na-akọwa oge ole ihe nchọgharị nwere ike ịnweta sava ahụ kpam kpam. HSTS na-enyere aka kpuchie ngwa weebụ maka ụfọdụ mgbochi waya na mgbasa ozi na-arụ ọrụ. Na usoro HSTS, onye na-awakpo ndị na-eji ọgụ mmadụ na-abata n'etiti ndị mmadụ enwere ohere ịnweta arịrịọ ma ọ bụ arịrịọ zitere n'etiti onye ọrụ na ngwa weebụ. Anyị na-eche banyere nchekwa gị!
Anyị website kpọkọta ndị na-esonụ ozi banyere ọbịbịa gị:
Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ya. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ọ bụla, ị nwere ike ịhọrọ, e-mail adreesị, ma ọ bụ na-adreesị ozi-e. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọmụma banyere pro probe ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme.
Nanị anakọtara ọmụma (ie. Nata na-enweghị gị ifịk ifịk na-enye ihe ọmụma) eji dị iche iche teknụzụ na ogbenye, dị ka Internet Protocol adreesị, kuki, Internet Tags ndị ọzọ. Nke a na ozi ga-ekwe ka mma ịkwa akwa ọdịnaya gaa na anyị ọrụ na ga-enyere mgbasaa ozi na haziri nzukọ mma ịghọta anyị na ndị ọbịa .
Nke a na-eme ka anyị na-atụ anya na anyị ga-eme ka anyị na-eche banyere ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-emeli ya.
Google, dị ka ndị ọzọ na-ere, na-eji na-eje ozi na mgbasa ozi na saịtị a kuki. DART kuki enyere Google nwere ike na-eje ozi na mgbasa ozi iji ọrụ dabere na ha nleta a na saịtị na saịtị ndị ọzọ na Internet.
Ị nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ na-eme Nzuzo maka mgbasa ozi na Google Content Network zichaa bọtịnụ nchekwa DART wepu aha.
Kasị nchọgharị na-akpaghị aka na-setịpụrụ na-anabata kuki faịlụ, ma ihe nchọgharị gị nwere ike ịtọ ka ajụ niile kuki ma ọ bụ na-egosi na a kuki a na-zitere. Ụfọdụ atụmatụ na ọrụ Google ghara arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na gị kuki nwere nkwarụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike n'oge ọ bụla ajụ kuki faịlụ site Google Inc v Obsahové si Google prostřednictvím Jụrụ DoubleClick kuki.
Mgbasa Ozi Kuki Mgbasa ozi Mgbasa ozi esighi na zakáže v internetových prohlížečích Firefox na Internet Explorer họrọ "DoubleClick kuki", ma ọ bụ Googlem pro vyhodnocení návštěvnosti odkazů a následně pak pro reklamní účely.